I-OUKITEL C17 Pro ifumaneka ngexabiso lokwazisa elikhethekileyo | I-Androidsis
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo sele sikuxelele que I-OUKITEL C17 Pro iya kukhutshwa okwethutyana ngexabiso elifanelekileyo. Umzuzwana osele ufikile, ifowuni iyathengiswa kwaye singayithenga ngexabiso elithile lokwazisa. Iidola ezingama-84,99 kuphela ziya kuthengwa kolu luhlu luphakathi lwenqaku laseTshayina, iintsuku ezine.
I-OUKITEL C17 Pro ime ngaphandle kwekhamera yayo engasemva kathathu, ngokongeza kolunye lwefashoni enkulu kumbindi ophakathi kwi-Android. Ukongeza, sele sibonile ukuba ifowuni ihambelana kakuhle ngokweenkcukacha. Ke ngoko, inikwe njengethuba elinomdla omkhulu.
Kule ntengiso yokwazisa kunokwenzeka ukuba uthenge i-OUKITEL C17 Pro kwi Ixabiso le- $ 84,99 kuphela phakathi kuka-Agasti 26-30. Iintsuku ezine zokuthenga olu luhlu luphakathi kwinqanaba elitsha lophawu ngexabiso elifanelekileyo. Kuya kwenzeka kuphela kule mihla, ke akufuneki uphoswe leli thuba.
Eli xabiso likhethekileyo linokufumaneka kwiAliexpress, apho unesi saphulelo esongezelelweyo. Ungayifumana kule khonkco ngamaxesha onke. Ke ukuba unomdla kwifowuni, eli lithuba elihle lokujonga malunga noku.
Kananjalo, akukho mfuneko yokuba senze nantoni na ukufumana le nto isaphulelo esongezelelweyo kwiAliexpress kwi-OUKITEL C17 Pro. Kulula kakhulu ukuyifumana ngeli xabiso, nangona kufuneka sikhawuleze kule meko, singaphoswa yile ntengiso kwaye sifumane olu luhlu lupheleleyo lwegama.
Ngoko ke, ukusuka nge-26 ukuya kwi-30 ka-Agasti ungayifumana le fowuni elona xabiso libalaseleyo. Ukuba ufuna uluhlu oluphakathi oluphakathi ngexabiso eliphantsi kakhulu, le OUKITEL C17 Pro yimodeli elungileyo yokuqwalaselwa. I $ 84,99 kuphela oza kukwazi ukuyithenga kwiAliexpress kule meko, kule khonkco.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-Oukitel » I-OUKITEL C17 Pro inokuthengwa ngoku nge- $ 84,99
I-Android 10 sele inomhla wokukhutshwa kwePixel kaGoogle
UMongameli oHloniphekileyo uqinisekisa ukuba i-V30 iza kuza neNkxaso ye-5G